Trains and Travel Blog Tips, Ideas and Savings | Save A tareenka
Markii nin socoto ah sheegaye booqanaya France, dadka intooda badan isla markiiba u qaadan lahaa Paris. Si kastaba ha ahaatee, caasimada France magaaladanuna ma aha magaaladii oo keliya qiimihiisu booqanaya dalka this qurux badan, U safarka Strasbourg waa IN cusub. meelo kale oo badan waa sida istaahila mahadnaq ah oo dhan…
safarka tareenka France, safarka Europe
Ma ay goori goor tahay in la qorsheeyo lagu baxsado ee March, ka hor rush Easter ah. Iyadoo kids iyagoo fasax, hadda la joogaa wakhtigii si aad u hesho fursad ay ku booqdaan jasiiradaha yar quaint la mid ah u jeclaaday, embark upon the first great family adventure of…
safarka tareenka, safarka tareenka Britain, Tareen Travel Holland, Tareen Travel The Netherlands, safarka tareen UK, safarka Europe
5 Talooyin Top Waayo Brisbane By tareenka
Brisbane waa caasimada Queensland iyo waxaa barakeeya kan A-liiska jiidashada sida Badda World, ee cagaarka u wanaagsan oo Jannada South Bank, iyo Story Bridge iyo dad badan oo dheeraad ah - buundada ugu dheer cantilever Australia. Sidoo kale magaalo hal abuur leh, with art museums and galleries and chic cafes…
Safrida oo dhan oo ku saabsan sahaminta, hadlayay dadka deegaanka, cunista cunto maxalliga ah iyo wixii la mid ah. dalka waa kala duwan yihiin in cabbirka iyo qaabka iyo dheeraad ah, taas oo ku xiran dalka, waxaa laga yaabaa ama laga yaabaa in aan loo kala qaybiyey gobolo kala duwan. Oo…
xaflado Easter in Europe kala duwan ee dalka in ay dalka oo magaalo ilaa magaalo. Waa mid ka mid ah ciidaha ugu weyn oo ugu da'da weyn ee Church Christian ah. Easter waa dabaal sarakicidda Ciise Masiix oo xabaashii laga. The celebration date for Easter…
safarka tareenka France, Tareen Travel Holland, safarka tareenka Italy, safarka Europe
Halkee aad u dabaaldegi karto FUURIIM In March
Yuhuudda qof Mardi GRAS? Ku qor Carnival FUURIIM! dabaal FUURIIM on maalmaha 14-ka iyo 15-aad ee Adaar, bishii laba iyo tobnaad ee Calendar Yuhuudda ay taariikhdu tahay March. FUURIIM ayaa damaashaad ah sida jawiga, iyadoo dadku ay xiran yihiin labbistooda ugu wanaagsan ee Sabtida ama labiska dharka wanaagsan…
safarka tareenka Britain, safarka tareenka France, safarka tareenka Hungary, safarka tareenka Switzerland, safarka Europe
Marka ay timaado in booqashada caasimadaha ugu caansan Yurub, London shaki la'aan waa ugu sareysa ee liiska dalxiis walba oo ay jiraan wax badan oo u sameeya london. Waxaa la helay muddo dheer ah, taariikh xiiso; durkiya qurux badan oo indhaha ku; and there’s plenty of things to…
safarka tareenka, safarka tareenka Britain, safarka tareen UK
Nice Carnival Oo sidii aad u heli Waxaa
Waxyaabaha weli waxaa laga yaabaa in yar oo qabow ah hareeraha waqtigan, laakiin Carnival Nice yahay Hubi in aad aad u kululee! The French Riviera creates a unique event where almost a million visitors from all over the world flock to Nice. Nice Carnival is one of the most…
Cologne Carnival Oo Sida loo Waxaa Hel
Festival Cologne waa xaqiiqo ah oo qiimihiisu ku daray liiska baaldi aad. 1.5 Milyan oo qof oo kale oo lagu wadaa inay ka qayb galaan, heshiiyaan! Sidoo kale loo yaqaan ee xilli ciyaareedka shanaad, iid caansan dunida ee ay tani tahay inuu noqon doono waayo-aragnimo ah ee Meyeydaan. The Cologne carnival is not only fun…
safarka tareenka, safarka tareenka Germany, safarka Europe
Waa xaqiiqo ah oo aad u fiican u yaqaan in Europe waa meel ugu fiican ee cheese tayo leh. Oo sidii lover jiis ah, laga yaabaa inaad rabto in aad ogaato taas oo cheese ugu fiican Europe leeyahay in ay bixiyaan iyo sida loo heli. Nagu soo biir markii aan ordayano…
safarka tareenka France, safarka tareenka Italy, safarka tareenka Switzerland, safarka Europe